Home Wararka Gobolada Waqooyi ee Somaliland oo galay xaalad deg deg ah iyo wararkii...
Gobolada Waqooyi ee Somaliland oo galay xaalad deg deg ah iyo wararkii ugu dambeeyay
Somaliland ayaa gashay xaalad deg deg ah, kadib markii xukuumadda Muuse Biixi ay ku dhawaaqday in abaarta deegaanadaas ay mareyso meel adag.
Madaxweyne Ku-xigeenka Somaliland, Cabdiraxmaan Saylici ayaa shalay shaaciyay in abaaro ay ku dhufteen dad hal Milyan ku dhaw oo ku kala nool lixda gobol ee ugu waaweyn Somaliland.
“Waxaa maanta halkan u soo joogsanay haddii aanu nahay guddidii gurmadka abaaraha in aanu ku dhawaaqno in abaartii meel adag marayso, ka dib markii roobkii gu’gu uu teel teel ku ahaa qaybo kamid ah dalka,” ayuu yiri.
“Waxa dalka ka jirto xaalad abaareed oo saamaysay dhamaan gobollada dalka, sida Sool, Sanaag, Togdheer, Saaxil, Howdka Maroodi-jeex iyo Xeebta Gobolka Awdal, qiimaynta lagu sameeyay abaarta, waxay si toos ah u saamaysay dad gaadhaya, 810,000 (sideed boqol iyo toban kun).”
Guddida qaran ee abaarta Somaliland ayaa waxay bilaabeen howlaha gurmadka abaarta iyaga oo qaaday tallaabooyin kala duwan, kuwaasi oo kala ah:
Waxa biyo-dhaamis ay ka bilaabeen booyadaha dawladdu gobolada Togdheer, Sanaag, Sool iyo Maroodijeex.
Xukuumadda Somaliland ee Muuse Biixi ayaa si wax looga qabto xaaladdan waxay u qoondaysay kharash dhan $ 3,000,000 Milyan (Saddex Milyan oo Doolar) oo lagu talogay Raashin, biyo-dhaamis iyo kicinta ceelasha xumaaday.
Previous articleDibad Bax looga soo horjeedo Mahdi Guuleed oo lagu qabanayo Muqdisho
Next article[AKHRISO] Maamulka Puntland oo ka jawaabay eedeyn loo jeediyay
Raisal Wasaare ku xigeenka Soomaaliya iyo wafdi uu hogaaninayo oo gaaray...